Qiimaha dollarka oo cirka isku shareeray iyo saamaynta uu ku yeelanayo Soomaalida | Somaliska
Bilihii la soo dhaafay waxaa aad kor ugu kacay qiimaha lagu iibsado dollarka maraykanka, iyadoo arintaas ay uga sii dartay ka dib markii isbuucaan uu bankiga dhexe ee Sweden (Riksbanken) hoos u dhigay qiimaha ribada (ränta) taasoo saamayn ku yeelanaysa sicirka karoonaha.
Qiimaha doollarka ee qaaliyoobay ayaa saamayn toos ah ku yeelanaya dadka Soomaalida ee lacagaha u dira familooda ku nool Somalia, iyadoo hada 100$ ay xawaaladaha ku dirayaan 942kr. Sanadkii hore xiligaan ayaa qiimaha dollarka uu marayay 680kr keliya. Qiimaha karoonka ee hoos u dhacay ayaa sidoo kale saamayn ku yeelanaya dadka ku nool Sweden ee la ganacsada wadamada kale iyo dadka safarada u baxaya sida dalxiisayaasha.
Qiimaha dollarka ee kacay ayaa Soomaalida waxaa u sii dheer in qaar ka mid ah xawaaladaha Soomaalida ee ka hawl gala Sweden laga xiray akoonadii ay ku shaqaysan jireen isla markaana guud ahaan xawaaladaha Soomaalida ee caalamka uu saaranyahay cadaadis kulul, qaasatan kuwa Maraykanka oo akoonadii iyaga guud ahaan laga xiray.
Jimcaale warlaqabaa xiiso maleh somalidu sidaa aad u ogtahay ayay u ogyiin, waxay ahayd inaad kahadasho waxa sababay iyo rajada lagaqabo inuu hoos udhoco saadaalinta mustaqbalka.
hadeey hishiiyaan ruushka iyo EU iyo U,S,A doolarka hoos ayoow u dhacayaa laakin indeey qasantahay xaaladaas kur ayow usii sucunayaa tani waa aragtideeyda
=D jimcaale sxb dollar hadda muusan qaalin,Website-ka wuxuu ku fiicanyahay in waxkasta marka ay cusubyihin lagu qoro hadda maahan.
walhi si weyn ayuu dhib noogu hayaa klin maxa sababay in uu sidaan oo dhan u kaco
Asc aniga waxan layabay dad sida jeesjeeska ah u hadla wiilkan jimcale webkan uu ino furay wanu ku libaanay macluumad badana wuu noo soo gudbin jiray hadii aad wax tabaysaan si degan inaa u codsataan ayaa fican dadka qaarkiii jaahil nimada aya aad ugu fog.wiilkaanoo kale waala dhiiri geliya.
Qofka hadad ladaba tagan tihiin hadal xun niyada kajabeeso.
lacagta € ugu diraa si anaad u qasariin